Mgbalị Mgbasa Ozi Mgbasa Yourlọ Ọrụ Companylọ Ọrụ Gị Ga-akwụghachi?
N’izu a, onye ahịa anyị na-ajụ maka ya na-ajụ ihe kpatara ọdịnaya ha ji arụ ọrụ ike na-adịghị ka ọ na-eweta ọdịiche. Onye ahịa a arụghị ọrụ iji zụlite ndị na-eso ha na mgbasa ozi mmekọrịta, kama itinye ọtụtụ n'ime mgbalị ha n'ahịa na-apụ apụ.
Anyị nyere ha foto nke etu ndị na-ege ha ntị na soshal midia jiri tụnyere ndị asọmpi ha - ma nyezie mmetụta ọ nwere na otu esi ekenye ọdịnaya ndị asọmpi. Ọnụọgụ ndị a buru oke ibu na mmụba nke nnukwu ndị na-ege ntị na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na-eri mmiri fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ na mbara igwe. Iji nwee ike ịsọ mpi na ọdịnaya, onye ahịa anyị ga-asọ mpi na mgbasa ozi mmekọrịta, kwa!
Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa azụmahịa gị na mgbasa ozi mmekọrịta, ịkwesịrị itinye oge na ihe onwunwe. Osisi mkpebi a na - enyere gị aka ịhụ ma ọ bụrụ na ị dịla njikere ịmalite ịgbasa ozi mgbasa ozi zuru oke nke ga - eduga na nlebara anya na azụmaahịa azụmahịa.
N'oge a, enwere m ike ịgbakwunye ajụjụ ọzọ ma ọ bụ na ị nwere ike ịkwalite ọdịnaya gị na mgbasa ozi mmekọrịta site na iji profaịlụ na ọdịnaya akwalitere. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ebupụta mbọ mgbasa ozi mmekọrịta gị, ịnwere ike ịnweta traction ngwa ngwa site na itinye ego iji wulite ndị na-ege gị ntị ngwa ngwa.
Kechioma n'ihi na ị, na ọhaneze mgbasa ozi nwere ụfọdụ ezigbo ngwaọrụ na ịchọta ohere iji mee nke ahụ. Na nyiwe dị ka Facebook, ị nwedịrị ike ịnweta nsụgharị ka mma site na ịkwalite ọdịnaya karịa naanị site na ibe ụlọ ọrụ gị.
Ngosipụta: Ana m eji nke anyị Adaba Mgbakwunye njikọ.
Tags: osisi mkpebiụlọ ọrụlaghachi azụmaahịaROIelekọta mmadụ mediasoshal midia ọdịnayamgbanwe mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ media curationmkpebi mgbasa ozi mgbasa ozintinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ media egomgbasa ozi mgbasa ozi na-alaghachi na ntinye egoelekọta mmadụ media roimgbasa ozi mgbasa oziusoro mgbasa ozi mmekọrịtaelekọta mmadụ roi